KNPP members in military training
အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို အားပေးကူညီနေတယ်လို့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်က စွပ်စွဲလိုက်တဲ့အပေါ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ KNPP ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီက ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
NCA အပစ်ရပ်သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးမထားတဲ့ KNPP နဲ့ KIA အဖွဲ့တွေဟာ လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်နေသူတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို ကူညီပူးပေါင်းနေကြပြီး၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ကယားပြည်နယ်မှာ တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နေရတယ်လိုိ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က သောကြာနေ့ စစ်ကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ ပြောခဲ့တဲ့အပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။
စစ်ကောင်စီတပ်တွေက အရပ်သားတွေကိုပါ ရက်ရက်စက်စက် အကြမ်းဖက်နေတာကြောင့်၊ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ခုခံနေရတာသာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း KNPP ပြောခွင့်ရ နဲနယ်ဖလိုး ကပြောပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းက မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ နေပြည်တော်မှာ မနေ့ကလုပ်တဲ့ စစ်ကောင်စီ ရဲ့ ဒီနှစ် ပထမဆုံးဆွေးနွေးပွဲ ၁ /၂ဝ၂၂ ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ခဲ့ရာမှာ အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် နံပတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ ပတ်သက်သူများနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုရပ်ရေး ထဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်ကောင်စီ တနှစ်ပြည့်ခါနီး လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်အကြောင်းတွေပြောရာမှာတော့ KNPP အပေါ် အခုလို အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကူညီလုပ်ဆောင်နေတာကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ပြောလာတဲ့အတွက် KNPP ရဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ မဟာမိတ်ရေးရာပြောခွင့်ရ နဲ့နယ်ပလိုး က အခုလိုတုံပြန်လိုက်ပါတယ်။
နဲ့နယ်ပလိုး (KNPP) ။. ။ကျနော်တို့ပြည်နယ်မှာတော့ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းက ဘယ်သူကနေ စလဲဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တို့မေးရမှာပေါ့နော်။ ပြည်သူတွေက ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာကို စစ်အုပ်စုက အကြမ်းဖက်နိုမ်နင်းတယ်။ KNPP ကိုစွပ်စွဲတယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ KNPP အဖွဲ့အနေနဲ့ ၁ဝနှစ်ဝန်ကျင်လောက် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်က ဘယ်မှအရာမရောက်ခဲ့တော့လေ အင်အားသုံးဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေဖက်ကနေ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ပြန်လည်ခုခံတော်လှန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကနေ ဒီအကြမ်းဖက်မှုကို စတင်တာမဟုတ်ဘူး ။ ဒီအကြမ်းဖက်မှုက စစ်အုပ်စုကနေ. စတင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ကယားပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေအတွင်း စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ စစ်သားနဲ့ အရပ်သားမခွဲတော့ဘူးလို့ နဲ့နယ်ဖလိုး က ရှင်းပြပါတယ်။
နဲ့နယ်ပလိုး ။. ။ စစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့ သာလွန်အင်အားကို သုံးတာတော့ တွေ့ရတာပေါ့နော်။ လေကြောင်းကတိုက်တာ၊ အမြောက်တွေသုံးတိုက်တာတွေ့ရတယ်။ အရပ်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်။ ဘာသာရေးအရအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေရှိသလို အရပ်သားပြည်သူတွေ အဆောက်အအုံတွေထဲနေပြီးတော့ ဖျက်ဆီးတာတွေလည်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီထက် ရုပ်ဆိုးတာကတော့ သူတို့အလောင်းတွေကို အရပ်သားပြည်သူတွေအိမ်ထဲထဲ့ထွက်သွားမီးရှို့တာရှိသလို အိမ်နောက်ဖေးမှာမြုတ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။ အဲလိုကြောင့် ကျနော်တို့ စစ်ဘေးရှောင်တွေက တသိန်းခွဲကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။ စစ်ဘေးရှောင်တွေက ထွက်ပြေးနေရသလို အစာရေစာမလုံလောက်မှုတွေ ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသလို သူတို့လုံခြုံရေးလည်း စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဗို်လ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် က ကယားပြည်နယ် တည်ငြိမ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတာရှိတာကိုလည်း နဲနယ်ပလိုး က အခုလိုပြောပါတယ်။
နဲ့နယ်ပလိုး ။. ။ စစ်ကောင်စီကတော့ ဒီပြည်နယ်ကို ပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြန်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ နယ်မြေစိုးမိုးရေးဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ဖက်က အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ လုပ်သွားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုနက ပြည်သူတွေ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ တော်လှန်ပုန်ကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ KNPP ကလည်း ပြည်သူနဲ့ တသားတည်းရပ်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ခုခံကာကွယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တချိန်တည်းမှာပဲ စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ပြောလာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ နဲ့နယ်ပလိုး ကလည်း
နဲ့နယ်ပလိုး ။. ။ ဒီအချိန်မျိုးမှာခက်လိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ စစ်ကောင်စီဖက်ကနေ တကယ်ပဲ ဆန္ဒဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်လို့ပြောတာလည်း သူတို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ငြိ်မ်းချမ်းရေးမဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးတာလည်း သူတို့ပဲ။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး တိုင်းပြည်ကို အကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့လည်း ဒီလိုဆွေးနွေးမှုမျိုးကို ဒီလိုယုံကြည်မှုအင်မတန်မှ နည်းပါးနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဆွေးနွေးဖို့ကတော့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်ပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလို ယုံကြည်မှုပျက်ပြားလာချိန်မှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအနိုင်ရဖို့ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ လည်း လေယာဉ်မပျံသန်းရဇုံသတ်မှတ်ပြီး လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ KNPP အနေနဲ့ KNU အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးတို့နဲ့ပေါင်းပြီး ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အကွမျးဖကျမှုတှေ အားပေးကူညီမှု စှပျစှဲခကျြ KNPP ပယျခြ
အကွမျးဖကျလုပျရပျတှကေို အားပေးကူညီနတေယျလို့ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျက စှပျစှဲလိုကျတဲ့အပျေါ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့တခုဖွဈတဲ့ KNPP ကရငျနီအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီက ပယျခလြိုကျပါတယျ။
NCA အပဈရပျသဘောတူစာခြုပျကို လကျမှတျထိုးမထားတဲ့ KNPP နဲ့ KIA အဖှဲ့တှဟော လကျနကျကိုငျဆနျ့ကငျြနသေူတှရေဲ့ အကွမျးဖကျလုပျရပျတှကေို ကူညီပူးပေါငျးနကွေပွီး၊ အကွမျးဖကျမှုတှေ ပျေါပေါကျနတေဲ့ ကယားပွညျနယျမှာ တညျငွိမျအောငျ လုပျနရေတယျလို့ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျက သောကွာနေ့ စဈကောငျစီ အစညျးအဝေးမှာ ပွောခဲ့တဲ့အပျေါ တုံ့ပွနျလိုကျတာပါ။
စဈကောငျစီတပျတှကေ အရပျသားတှကေိုပါ ရကျရကျစကျစကျ အကွမျးဖကျနတောကွောငျ့၊ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ခုခံနရေတာသာ ဖွဈတယျလို့လညျး KNPP ပွောခှငျ့ရ နဲနယျဖလိုး ကပွောပါတယျ။ ကိုဝငျးမငျးက မေးမွနျးတငျပွထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ နပွေညျတျောမှာ မနကေ့လုပျတဲ့ စဈကောငျစီ ရဲ့ ဒီနှဈ ပထမဆုံးဆှေးနှေးပှဲ ၁ /၂ဝ၂၂ ထဲမှာ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ က ကမ်ဘောဒီးယားဝနျကွီးခြုပျနဲ့ တှခေဲ့ရာမှာ အာဆီယံဘုံသဘောတူညီခကျြ နံပတျ ၁ ဖွဈတဲ့ ပတျသကျသူမြားနဲ့ အကွမျးဖကျမှုရပျရေး ထဲ့ပွောခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ စဈကောငျစီ တနှဈပွညျ့ခါနီး လကျနကျကိုငျအကွမျးဖကျအကွောငျးတှပွေောရာမှာတော့ KNPP အပျေါ အခုလို အကွမျးဖကျမှုတှေ ကူညီလုပျဆောငျနတောကို ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးက ပွောလာတဲ့အတှကျ KNPP ရဲ့ နိုငျငံတကာနဲ့ မဟာမိတျရေးရာပွောခှငျ့ရ နဲ့နယျပလိုး က အခုလိုတုံပွနျလိုကျပါတယျ။
နဲ့နယျပလိုး (KNPP) ။. ။ ကနြျောတို့ပွညျနယျမှာတော့ အကွမျးဖကျလုပျငနျးက ဘယျသူကနေ စလဲဆိုတာကိုတော့ ကနြျောတို့မေးရမှာပေါ့နျော။ ပွညျသူတှကေ ငွိမျးခမျြးစှာဆန်ဒထုတျဖျောနတောကို စဈအုပျစုက အကွမျးဖကျနိုမျနငျးတယျ။ KNPP ကိုစှပျစှဲတယျဆိုတာက ကနြျောတို့ KNPP အဖှဲ့အနနေဲ့ ၁ဝနှဈဝနျကငျြလောကျ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေးဖွဈစဉျက ဘယျမှအရာမရောကျခဲ့တော့လေ အငျအားသုံးဖွရှေငျးခဲ့တဲ့အတှကျ ပွညျသူတှဖေကျကနေ ကိုယျကိုကိုယျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ပွနျလညျခုခံတျောလှနျနတေဲ့အနအေထားမြိုးဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှကေနေ ဒီအကွမျးဖကျမှုကို စတငျတာမဟုတျဘူး ။ ဒီအကွမျးဖကျမှုက စဈအုပျစုကနေ. စတငျတဲ့အကွမျးဖကျမှုဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ကယားပွညျနယျအတှငျး တိုကျပှဲတှအေတှငျး စဈကောငျစီအနနေဲ့ စဈသားနဲ့ အရပျသားမခှဲတော့ဘူးလို့ နဲ့နယျဖလိုး က ရှငျးပွပါတယျ။
နဲ့နယျပလိုး ။. ။ စဈအုပျစုကနပွေီးတော့ သာလှနျအငျအားကို သုံးတာတော့ တှရေ့တာပေါ့နျော။ လကွေောငျးကတိုကျတာ၊ အမွောကျတှသေုံးတိုကျတာတှရေ့တယျ။ အရပျသားပွညျသူတှနေထေိုငျတဲ့နရောတှမှော ရမျးသမျးပဈခတျတာတှရှေိတယျ။ ဘာသာရေးအရအထှတျအမွတျထားတဲ့နရောတှကေိုလညျး ပဈမှတျထားပွီးတိုကျခိုကျတာတှရှေိသလို အရပျသားပွညျသူတှေ အဆောကျအအုံတှထေဲနပွေီးတော့ ဖကျြဆီးတာတှလေညျးရှိတယျ။ ပွီးတော့ အဲဒီထကျ ရုပျဆိုးတာကတော့ သူတို့အလောငျးတှကေို အရပျသားပွညျသူတှအေိမျထဲထဲ့ထှကျသှားမီးရှို့တာရှိသလို အိမျနောကျဖေးမှာမွုတျထားတာလညျးရှိပါတယျ။ အဲလိုကွောငျ့ ကနြျောတို့ စဈဘေးရှောငျတှကေ တသိနျးခှဲကြျောလောကျရှိသှားပွီပေါ့နျော။ စဈဘေးရှောငျတှကေ ထှကျပွေးနရေသလို အစာရစောမလုံလောကျမှုတှေ ဆေးဝါးမလုံလောကျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေသလို သူတို့လုံခွုံရေးလညျး စိုးရိမျရတဲ့အနအေထားရောကျနပေါတယျခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဗျိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ က ကယားပွညျနယျ တညျငွိမျဖို့ လုပျဆောငျနတောရှိတာကိုလညျး နဲနယျပလိုး က အခုလိုပွောပါတယျ။
နဲ့နယျပလိုး ။. ။ စဈကောငျစီကတော့ ဒီပွညျနယျကို ပွနျလညျစိုးမိုးနိုငျဖို့အတှကျ စဈအုပျခြုပျရေးနဲ့ပွနျလုပျနတောဖွဈတယျ။ သူတို့ရဲ့ နယျမွစေိုးမိုးရေးဖွဈစဉျမှာဆိုလို့ရှိရငျ သူတို့ဖကျက အကွမျးဖကျပွီးတော့ လုပျသှားတာရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ အခုနက ပွညျသူတှေ လကျနကျကိုငျပွီးတော့ တျောလှနျပုနျကနျနကွေရတာဖွဈပါတယျ။ KNPP ကလညျး ပွညျသူနဲ့ တသားတညျးရပျတညျတဲ့အဖှဲ့အစညျးဖွဈတဲ့အတှကျ ခုခံကာကှယျနရေတာဖွဈပါတယျခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တခြိနျတညျးမှာပဲ စဈကောငျစီဥက်ကဌ ပွောလာတဲ့ အကွမျးဖကျမှုတှရေပျရေးဆှေးနှေးပှဲမှာလညျး ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှုမှာပါဝငျခဲ့တဲ့ နဲ့နယျပလိုး ကလညျး
နဲ့နယျပလိုး ။. ။ ဒီအခြိနျမြိုးမှာခကျလိမျ့မယျ။ ဘာလို့ဆိုတော့ စဈကောငျစီဖကျကနေ တကယျပဲ ဆန်ဒဘယျလောကျရှိသလဲဆိုတာ ငွိမျးခမျြးရေးလိုခငျြတယျလို့ပွောတာလညျး သူတို့ပဲ။ ဒါပမေယျ့ စဈမှနျတဲ့ငွိမျးခမျြးရေးမဖွဈအောငျဆှေးနှေးတာလညျး သူတို့ပဲ။ စဈအာဏာသိမျးပွီး တိုငျးပွညျကို အကွမျးဖကျအုပျခြုပျနတေဲ့အခါမြိုးမှာ ပွညျသူပွညျသားတှအေနနေဲ့လညျး ဒီလိုဆှေးနှေးမှုမြိုးကို ဒီလိုယုံကွညျမှုအငျမတနျမှ နညျးပါးနတေဲ့အခါမြိုးမှာ ဆှေးနှေးဖို့ကတော့ ခကျခဲလိမျ့မယျပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလို ယုံကွညျမှုပကျြပွားလာခြိနျမှာ အပွဈမဲ့ပွညျသူတှအေနိုငျရဖို့ နိုငျငံတကာအနနေဲ့ လညျး လယောဉျမပြံသနျးရဇုံသတျမှတျပွီး လူသားခငျြးစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ KNPP အနနေဲ့ KNU အမြိုးသားအစညျးအရုံးနဲ့ CNF ခငျြးအမြိုးသားတပျဦးတို့နဲ့ပေါငျးပွီး ပူးတှဲကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့ပါတယျခငျဗြာ။